ကိန္နရီကျွန်းများအပိုင်း 1 နှင့်အပိုင်း 2
ကိန္နရီကျွန်းများအပိုင်း 1 နှင့်အပိုင်း21 တစ်လအကြာ 1 တစ်နှစ် #1421
အဖြစ်ဝေးငါညွှန်ကြားချက်နောက်တော်သို့လိုက်ပေမယ့်ပါပြီပြောပြနိုင်သကဲ့သို့ဘာသာရပ်ရှုခင်းကို install လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းနှင့် FSX ရှုခင်းကိုပြသသည်မဟုတ်။ ငါမလုပ်ခဲ့ဘူးတစ်ခုတည်းသောအရာဟာငါ့ကိုဖတ်ပါ files.They ကိုဖတ်ရှုနေသည်စပိန်၌ရှိကြ၏။ ငါဂျာမန်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်နိုင်ပေမယ်ပေမယ့်စပိန်ဆိတ်ကွယ်ရာ ke pasa ကနေ, အကြှနျုပျကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ မဆိုအကူအညီအများကြီးတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မည်။
ကိန္နရီကျွန်းများအပိုင်း 1 နှင့်အပိုင်း211 လအတွင်း3weeks ago #1442
ငါကိန္နရီကျွန်းတွင်တည်ရှိပြီးစပိန်အတွက်ဤအရပ်ဌာနကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုကြိုးစားကြရန်သင့်အားအကြံပြုပါသည်။ ဒါဟာ Gran Canaria ခေါ်ကစပိန်အတွက်မဖြစ်မနေ-အလည်အပတ်ခရီးဖြစ်ပါတယ်။ ငါနှင့်ငါ့မိတ်ဆွေတွေကိုစပိန်မှလေယာဉ်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်နှင့်ဤကျွန်းသို့သွားရောက်မဆိုမိနစ်ဖြုန်းမေ့သွားရော။ ဖြစ်ပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အထုတ်စစ်ဆေးရမည်။ ပိုကဒီမှာကဒီမှာ Read www.canaryislandsinfo.co.uk/tenerife/places/los-cristianos/ ။ နေရာနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကဘို့။
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: Sambrook
ကိန္နရီကျွန်းများအပိုင်း 1 နှင့်အပိုင်း211 လအတွင်း3weeks ago #1444
မြင်ကွင်းပေါ်ရှိညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာခြင်း မှလွဲ၍ ဘာမှမလုပ်သင့်ပါ။ ပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ။ setup ပေါ်တွင် corect အကွက်များကိုသင်အမှတ်ခြစ်ခဲ့သလား။ သင်အမှန်ခြစ်ပေးပါ FSX ဒါမှမဟုတ် FSX အစားရေနွေးငွေ့လား ကိုယ့်ကိုပြုသည့်အခါဒါဟာလွယ်ကူသော install ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသေချာပေါက်စပိန်အတွက်ဘာမှမဖတ်ရန်လိုအပ်သည်! ဟားဟား။ ပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီးဂရုတစိုက်လိုက်နာပါ။
ကိန္နရီကျွန်းများအပိုင်း 1 နှင့်အပိုင်း211 လအတွင်း2weeks ago #1448
Tien Que mirar siempre Las carpetas, y က instalar ဎ la စာကြည့်တိုက် del FSX las carpetas que tenga ရှုခင်း y က texture que tiene que estar dentro က de Canary part1 y က Canary အပိုင်း 2
တရုတ် el FSX el simulador en te Las reconoce မျှ
ကိန္နရီကျွန်းများအပိုင်း 1 နှင့်အပိုင်း211 လအတွင်း2weeks ago #1449
သငျသညျအမွဲဖိုလ်ဒါကိုကြည့်ဖို့ရှိသည်နှင့်, အတွက် install လုပ် FSX စာကြည့်တိုက် Canary part1 နှင့် Canary အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွင်း၌ဖြစ်ရှိသည်သောရှုခင်းနှင့် texture ရှိသည်သောဖိုလ်ဒါ 2
ဒါပေမယ့် FSX အဆိုပါ Simulator ကို၌သငျအသိအမှတျမထားဘူး
0.209 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်